Advanced Registry Clear 2.3.4.2 Full Version ~ လမင်းတရာ
IN Cleaner, Utilities - ON 10:20 PM No comments
Windows စနစ်မှာ အရေးကြီးဆုံးဟာ Registry ဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့တွေ နေ့စဉ်နီးပါး Software ထည့်ကြ၊ ဖြုတ်ကြ၊ Virus ကလည်း ဝင်လာ. စသည်ဖြင့် Registry မှာ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ အမှားတွေ၊ မလိုအပ်တဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်လာပြီး Windows System ဟာ ပုံမှန် အလုပ်မလုပ်တော့ဘဲ ကမောက်ကမတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်.. ဒါကို Windows က သူ့ကိုယ်တိုင် မဖြေရှင်းနိုင်ပါဘူး.. Software တစ်ခုခု သုံးပြီး ဖြေရှင်းရပါတယ်.. Advanced Registry Clear 2.3.3.8 ဟာ Windows စနစ်အားလုံးရဲ့ Registry တွေကို အကောင်းဆုံး သန့်ရှင်းပေးတဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်.. မှားနေတာတွေ၊ တစ်ပိုင်းတစ်စ ပျက်နေတာတွေ၊ မလိုအပ်တာတွေကို ပြုပြင်၊ ဖယ်ထုတ် ပြီး အကောင်းဆုံး System တစ်ခု ဖြစ်လာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်...
Advanced Registry Clear -atool designed to clean the registry of Windows, removing unnecessary and erroneous entries, fix problems, etc. Performing these operations can improve performance and stability of the OS.
Combined registry scan and repair with system optimizer, privacy sweep and other utilities such as disk checker, disk cleaner, file pulverizer ..., Advanced Registry Clear can meet all your needs of registry software: streamlining registry, improving system, protecting privacy, and more, just imagine.